Ignacio Sala | | လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ပုံ
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့အမျိုးအစားကိုခံစားရန်အထူးသဖြင့်အဝတ်အစားကိုရှာဖွေသောအခါ၊ သို့မဟုတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်းကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကခွင့်ပြုပါကစျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောဖြစ်နိုင်ချေများကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဘေးဖယ်အချို့သောစွန့်ခွာ.
အမျိုးသားများအတွက်ဆွယ်တာအင်္ကျီများသည်ယခုအချိန်တွင်အားကစားလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အားကစားအဝတ်အစားများနှင့်အတူ ၀ တ်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အထည်ချုပ်တစ် ဦး ဖြစ်တော့သည်။ လတ်တလောဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဝတ်အစားမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသောထုတ်လုပ်သူအမြောက်အများကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် Sharkers၊ ကုမ္ပဏီ၏အဝတ်အစားလိုင်းကိုအဓိကထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့အားကစားအတွက်နှင့်ချွေးထွက်အင်္ကျီတစ်ထည်.
1 Sharkers ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတာ
2 Sharkers ချွေးများ
3 Sharkers Zip Hoodie ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Sharkers ကကျွန်တော်တို့ကိုကျယ်ပြန့်တဲ့အကွာအဝေးပေးထားပါတယ် လူတို့အဘို့ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီ ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအားလုံးအတွက်၊ ချွေးသောရှပ်အင်္ကျီများသည်မတူညီသောအထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအေးခဲသောနေ့ရက်များတွင်သို့မဟုတ်ရာသီဥတုကစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရာသီဥတုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုပေါ့ပါး။ စွယ်စုံသုံးအဝတ်အထည်များကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်သောနေ့ရက်များအတွက်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောချွေးအင်္ကျီများ၏မတူညီသောပုံစံများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် ယင်းကို chinos၊ classic jeans သို့မဟုတ်အခြားဖြတ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ပါကျပန်းလှံနှင့်ကျပန်းဘောင်းဘီများပင်။
ဒီထုတ်လုပ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုမတူညီတဲ့ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီများ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်အပြင်စတိုင်လ်များကိုကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်နှင့်အမျှဝတ်ဆင်လိုသည့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊
အိတ်ကပ်နှင့်အတူ Hoodie ။ ဒါကငါတို့အားလုံးသိတဲ့ဂန္ထဝင်အင်္ကျီတစ်ထည်ဖြစ်ပြီးမင်းတို့ထဲကတချို့ဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာရှိခဲ့ဖူးတယ်၊
အိတ်ကပ်နှင့်ဇစ်နှင့်အတူပါးပျဉ်းချွေးထွက်။ ဒီမော်ဒယ်ကဘယ်နေရာမှာဘယ်ကိုဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာအချိန်သိပ်မသိရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဘက်စုံသုံးမှုကိုပေးပါတယ်။ ဗဟိုဇစ်၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အချိန်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ၎င်းကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။
အိတ်ကပ်မပါဘဲပါးပျဉ်းချွေးထွက်အင်္ကျီ။ ဤပုံစံသည်ဒေတာအိတ်ကပ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပိုမိုကြော့ရှင်းသည့်ထိတွေ့မှုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကို၎င်းကိုကျောပိုးအိတ်ကဲ့သို့အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီး၊ အများအားဖြင့်အထည်သည်ထုတ်ကုန်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပြင်အရုပ်ဆိုးစေသည်။
နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဇစ်နှစ်ခုနှင့်အတူအစိုင်အခဲပါးပျဉ်းချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီ။ ဤအထူးချွေးထွက်အင်္ကျီပုံစံသည်ဤအထည်အမျိုးအစားတွင် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားမော်ဒယ်များတွင်မတွေ့နိုင်သောသက်သောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ကျယ်ဝန်းမှုကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပါးပျဉ်းသို့မဟုတ်အိတ်ကပ်မရှိပါ။ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကအထင်ကရဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ်တွင်လှပသော်လည်းအလွတ်သဘောဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင်အသုံးအများဆုံးအ ၀ တ်အစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာဘယ်တော့မှစတိုင်ကျတော့မည်မဟုတ်ဘဲသာမိုမီတာကိုပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့်အနေအထားကိုရှာမတွေ့နိုင်သည့်နေ့များအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြည့်စွက်ဖြစ်သည်။
Sharkers Zip Hoodie ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဒီအထည်အမျိုးအစားကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကနေချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုကြိုးစားဖို့ငါတစ်ခါမှအခွင့်အရေးမရခဲ့ဖူးဘူးဆိုတာဝန်ခံရမယ် ငါပီတိအံ့သြသွားတယ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောဒီဇိုင်းနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအတွက်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ဖက်မှာရှိတဲ့ဇစ်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်နွေ ဦး ရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြပုံစံဖြစ်တယ်၊ အဲဒီနှစ်ကဂျာကင်အင်္ကျီကအ ၀ တ်ထည်တွေစိုစွတ်လာတယ်၊ ပူနွေးလာတယ်၊ ပြီးတော့ရှပ်အင်္ကျီလက်တွေမစီးနိုင်ဘူး၊ နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီ၌အသုံးပြုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအဝတ်ဖြစ်သည်.
ဒီမော်ဒယ်ကိုအပေါ်ပိုင်းရှိအပြာရင့်ရောင်များကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးတံတောင်ဆစ်အထိရှိသည့်လက်များ၊ ဘယ်ဘက်တွင်တံဆိပ်၏အမည်နှင့်အနိမ့်ပိုင်းတွင်အဖြူ၊ ဇင့်မရှိဘဲတည်ရှိသည်။ ။ အလယ်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဇစ်ပါရှိသည်။ ချွေးထွက်မကျဘဲချွေးထွက်အင်္ကျီတစ်လုံးလုံးကိုဝါဂွမ်းနှင့်အီလက်စတန်နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် သိုးမွှေးနံရံအအေးကနေကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်.
ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီကိုပိတ်နိုင်သောဇစ်ပါ လည်ပင်းအထိဖုံးလွှမ်းထားသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအေးသောလေထုတစ် ဦး အသွင်အပြင်ကိုစတင်သောအခါအပိုဆောင်းပဝါသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီများနှင့်မတူဘဲဇင့်ကိုဤနည်းဖြင့်ချုပ်ထားသည်။ သို့ဖြစ်ရာထိုအ ၀ တ်အထည်တွင်အလွန်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ဘေးတိုက်အိတ်ကပ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအအေးမိလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေချင်တဲ့အချိန်မှာလက်တွေအပြင်သော့တွေဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံတချို့ကိုသိုလှောင်ဖို့နေရာအလုံအလောက်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမိုဘိုင်းတစ်ခုသိမ်းထားရန်နေရာအလုံအလောက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် သူတို့အမြင့်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူ့ဟာသူထိုင်သောအခါသို့မဟုတ်ထသောအခါ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့မဖြုတ်ပစ်ရန်သေချာစေရန်သင်၏လက်ကိုသင်၏အိတ်ကပ်ထဲသို့ထည့်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီများ၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းကိုချိန်ညှိ။ polyester နှင့် elastane တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့အား ဦး ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်ရန်နေရာအလုံအလောက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာများထိတွေ့ထားခဲ့ပါ, ငါတို့ပတ်လည်ရှိလူများမှားယွင်းတဲ့ခံစားမှုပေးရန်။
ဒီ Sharkers မော်ဒယ်ကငါတို့ကိုဖြူဖပ်ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပေးထားတယ် အဆုံးမှာငွေ rivetsအခြားထုတ်လုပ်သူများမတွေ့ရှိနိုင်သောအလွန်မူရင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုကိုပေးခြင်း။ သင့်ခေါင်းကိုပါးနပ်စွာညှိရန်ခွင့်ပြုထားသောကြိုးအတွက်Theရိယာသည်ချွေးထွက်အင်္ကျီ၏အထက်ပိုင်းနှင့်တူညီသောရေတပ်အပြာရောင် rivet ရှိသည်။
ချွေးထွက်အင်္ကျီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် တစ် ဦး အတွက်ဝါဂွမ်း 60%, 35% polyester နှင့် 5% elastaneကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္perfectlyာန်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း။ ၎င်းကို S, M, L, XL နှင့် XXL အရွယ်အစားများရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောပုံစံကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြproblemနာမရှိပါ။ ငါဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအဘို့ငါကြိုးစားခဲ့သော XXL မော်ဒယ်, အတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်, ငါတို့စျေးဝယ်စင်တာများတွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဝတ်အစားများအပြင်ပုံမှန်အရွယ်အစားနှင့်အတူမဆိုင်ပါဘူး။
Shaker ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း က်ဘ်ဆိုက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်မှုမှာထည့်ထားတဲ့ချွေးထွက်အင်္ကျီတွေအားလုံးကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ခဲ့သောမော်ဒယ် စျေးကတော့ ၁၅၉ ယူရိုရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်ပို့ဆောင်စရိတ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PayPal သို့မဟုတ် credit သို့မဟုတ် debit ကဒ်များဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » Sharkers, အမျိုးသားများအတွက်နေ့စဉ်ချွေးသောရှပ်အင်္ကျီ